जनचाहना अनुसार योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछौं ः नगर प्रमुख सन्तलाल चौधरी, गुजरा
अन्तरवार्ता 12 पटक पढिएको प्रेमचन्द्र झा क्रान्तिद्वार दैनिक
रौतहटको गुजरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख संतलाल चौधरी संग क्रान्तिद्धार दैनिकका लागि सम्पादक प्रेमचन्द्र झाले गर्नु भएको अन्तरवार्ता प्रस्तुत छ ।
० गुजरा नगरपालिकाले विकास निर्माण लगायतका काम कार्यवाही कसरी अगाडी बढाएका छन् ?
चालु आथिृक वर्षमा नगर सभा ढिलो गरी शुरु भयो । नगर सभा लगतै प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भएपछि अर्को प्रशासकीय अधिकृत आउन २ महिना ढिलाई भयो । जसको कारण विकास निर्माणको काम हामीले ढिल्लो शुरु गर्यो ।
० विकासको काममा बढी प्राथमिकता के ले पाएको छ ?
बढी जसो काम भौतिक पूर्वाधार कै हो । जहाँ मुस्लिम बाहुल्यता छ । मस्जिद र मोकतममा गएका छन । पानी जम्ने ठाउँमा ढलान बाटो बीरहेका छन । गत वर्ष हिलो भएका बाटोमा माटो पुरेर ग्रेभल गर्ने काम भएका छन् । नाला निर्माण भएका छन ।
० जनतालाई आत्म निर्भर बनाउने, स्वरोजगार वृद्धि हुने खालका सीपमुलक÷आयमुलक तालिम दिने तर्फ नगरपालिकाले कतिको जोड दिएका छन ?
निश्चय पनि हाम्रो सोच त्यता तर्फ थियो । तर समयको अभावले गर्दा केही मात्रामा मात्रै गर्न हामी सफल भए । जस्तै बाखा्रापालन, बंगुर पालन, माछा पालन तालिम जस्ता कार्यक्रम संचालनमा भएका छन । विशेष गरेर महिलाहरुलाई लषित गरेर तरकारी खेती मकै खेती लगायत तालिम संचालन गरिएका छन ।
पुरुषहरुलाई त्यतिकै छोडिएका छैन । पुरुषहरुलाई पनि सिपमुलक तालिम दिएका छौं । जस्तो धानखेती, विउ उत्पादन सम्बन्धी तालिम दिएका छौं ।
मसुरो धान, मकै तरकारीको उन्नत विउ कसरी उत्पादन गर्ने सम्बन्धी तालिम चलाएका छौं । खास गरेर महिलाहरुको आय आर्जन बढाउन उन्नत जातको ४ वटा बोका वितरण गरिउको छ । वोयर जातको बोका जुन उन्नत जातको नवल परासीको गैडाकोटबाट किनेर ल्याई बाडेका छौं । ०गुजरालाई विकसित नगरपालिका बनाउन आगामी आर्थिक वर्षम ाकस्ता किसिमको योजना दिन सोचमा हुनु हुन्छ ?
वितेको दुई वर्ष भन्दा पहिलेको अवस्थामा यो नगरपालिका जिरोमा थियो। हामी निर्वाचित भएर आएपछि बाटो बन्न शुरु भएको छ । मेन रोड कालो पत्र भएको छैन । ०७७ सम्म हुन्छ । नगरको भितरी क्षेत्रका बाटाहरु बन्ने क्रममा रहेका छन । आगामी आथिृक वर्ष २०७६।०७७ को लागि नगर सभा नभएको अवस्था छ । बैठकहरु जारी रहेका छन । राजस्व परामर्श समितिको बैठक बसेको छ । अनय कुराका लागि विज्ञहरु संग छलफल गरी रहेका छौं । हामी यही आसार २० गते भित्र नगर सभा सम्पन्न गछौं । निश्चय पनि हामी आगामी वर्षम ाविकासका काम समयमै शुरु गरेर बढी भन्दा बढी काम गर्नेछौं । बढी भन्दा बढी जनता लाभान्वित हुने योजना संचालन गर्नेछौं । यो नगरपालिका समृद्ध हुने विश्वास लिएका छौं ।
० गुजरा नगरपालिकाले गोरवका योजनाको रुपमा कुन काममलाई अगाडी बढाउन खोजी रहेका छन् ?
गुजरा फन पार्क चोचामा नगर गौरवका योजनाको रुपमा बढाउन खोजेका छौं । प्लानिगं प्रोसेसका काम भई सकेका छन । आगमी आथिृक वर्षमा यसलाई निर्माणको काम अगाडी बढाइने छ । अर्को होम स्टेका काम लाई नगर गौरवको योनजा संग जोडेर अगाडी बढाउने सोच बनाएका छौं ।
चोचा नहर पूर्व फन पार्व र पश्चिम खुल्ला चिडिया खाना स्थापना गर्ने काम अगाडी बढी सकेको छ । डिभिजन वन संग भएको सहमति अनुसार खुल्ला चिडियाखाना निर्माणमा हाम्रो सहकार्य हुने छ । पकै पनि यो काम नगरपालिका भित्र नमुनाको काम हुनेछ ।
० जवाफदेहिता, परादर्शीता, सुशासन र सदाचार जुनकुरा स्थानीय तहमा लागु गर्न योजना छनौट प्रक्रिया देखि विभिन्न क्रियाकलाप मार्फत गर्नु पर्ने देखिन्छ । गुजार नगरपालिकामा यी कुरा प्रबद्र्धन गर्न के के गर्नु भएको छ ?
जनताको घर घरमा हामी वडा अध्यक्ष साथीसंग जानु पर्नेमा समय अभावले जान सके होला । केही कमिकमजोरी गरेर उपभोक्ता समिति गठन गर्नु भएको होला । तर अवब अगामी योजनामा सबैलाई सूचना गरेर डोर टु डोर गएर जनचाहना अनुसार योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
०जनताबीच गरेको बाचा पुरा गर्नु कतिको सफल हुनु भएको छ । आफैले आफैलाई स्वः मूल्यांकनमा के भन्नु हुन्छ ?
— म एकदम सन्तुष्ट छु । मैले जनभावना अनुसार काम गरेको छु । त्यसैले जनता पनि सन्तुष्ट हुनु हुन्छ । दिल्लै भएपनि जनताले भने अनुसारको काम गरेर देखाएका छौं ।
० गुजारलाई समृद्ध बनाउन गुजारवासी जनतासंग तपाईलाई कस्तो सहयोग चाहियो ?
— जनताजनता र जनप्रतिनिधि साथीको सहयोग विना समृद्धि सम्भव छैन । हामी सबै मिलेर अगाडी बढीरहेका छौं ।
०अन्तमा यहाँको जनतालाई के संदेश दिन चाहनु हुन्छ ?
बाटो पुलले गुजरा समृद्ध हुदैन । हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रगति गर्न सक्यो भने मात्र हामी समृद्धिको नजिक पुग्न सक्छौं । शिक्षामा जतिको विकास गर्नु पर्ने त्यति पुग्न सकेका छैनौं ।
आगमी दिनमा शिक्षा, स्वास्थय र कृषिमा विकसा गरेर अगाडी बढनु पर्ने हुन्छ ? यति गर्ने सके गुजरा नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । यसका लागि मेरो तर्फबाट हरदम प्रयास जारी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
1485940	Times Visited.